Post oge: 02-26-2021
Post oge: 02-24-2021
Post oge: 01-14-2021
Post oge: 01-04-2021
Post oge: 12-22-2020
Post oge: 12-14-2020
Ngbede nke ehihie site na 50! 201-ụkwụ ise na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara na-aga n'ihu na-aga n'ihu
Na ahịa nke ehihie, a ga-ebuli ngwa-ngwa igwe eji agba ịnyịnya ígwè 201 ọkụ ọkụ site na 50-100 yuan / ton. Dabere na nzaghachi sitere na ndị na-ere ahịa n'ahịa, azụmahịa ahụ n'ụtụtụ dị ezigbo mma, ọnụahịa igwe igwe ebulikwa ya site na 100. Ya mere, ọtụtụ ndị ahịa na ahịa r ...GỤKWUO »
Gịnị bụ igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ?
Post oge: 11-10-2020
The igwe anaghị ata nchara mpempe akwụkwọ nwere ezigbo elu, plasticity dị elu, ike na n'ibu ike, na-eguzogide corrosion site asịd, alkaline gas, ngwọta na ndị ọzọ na media. Ọ bụ ihe alloy ígwè na-adịghị mfe nchara, ma ọ bụ nnọọ ajari-free. Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ na-ezo aka ...GỤKWUO »
Ọ mechara elu! 201 Nzuzo akpọrepu igwe anaghị agba nchara na-eche kwa ogologo
Post oge: 11-05-2020
Mmeghe nke Qingshan 201 igwe anaghị agba nchara nyere nkwado siri ike na 201 Cold Rolling, nke na-enweghị uto. N'ehihie, Qingshan 201 oyi Rolling igwe anaghị agba nchara awa J1-7350 yuan / ton na J2-7000 yuan / ton na December, na ahịa ahịa ngwa ngwa soro. , Ugbua mar ...GỤKWUO »